XAALADDA BURCAD BADEEDA(w/q:xareed s. cadawe) | raascasayrmedia.com
← Fananka codka dahabiga ah leh ee ka soo jeeda deegaanada Casayrland oo la gudoonsiiyay shahaado sharaf
Wasarada Deeganka Dawlada Puntland oo Maantay soo bandhigtay mashaaric Biyo Xireen ah oo laga Fulinayo Gobolada Nugal iyo karkaar. →
April 26, 2010 · 1:14 pm
XAALADDA BURCAD BADEEDA(w/q:xareed s. cadawe)
Dhowr sano ka dib, burburka Soomaalida helay markii uu dabo dheeraaday. Ee warjeefkii iyo dhacii berrigu nolosha ka mid noqday, ayaa qaar Soomaalida ka mid ahi mooryaanimadii u wareejiyeen badaha iyo marinada biyaha ee caalamiga ah. Markaas ayaa madax-xanuunkii soomaalida hayey sii labalixaadsaday. Caalamki kalena af-labadiis yeeray! Muddo gaaban ayaa weedha ah “Burcad badeed” waxay qabsatay dhegaheenna.
Qormadaan waxaan ugu talo galay in aan xog idin ka siiyo Burcad badeeda iyo qaabkeeda shaqo. Ka dib markii aan sheekadooda ururiyey.
Yaa Burcad badeed Ah
Waa xirfad-layaal isbiirsaday oo in ay qawlaystaan ku bahoobay! Waxayna ka kooban yihiin dhowr kooxood, oo midiba xirfad iyo kaalin u gaar ah la timi. In la fahmo waxay ku xiran tahay in loo kala sooco sida shaqooyinkooda iyo doorarkoodu u kala gedisan yihiin. Dabcan, aragti ahaan waxay ila tahay sidan:
Kooxo weerar taga: waa qaybta ugu badan, uguna khatartsan oo markasta sii kobcaysa. Waxayna intooda badan kasoo jeedaan rag markoodii hore kalluumaysato ahaa. Waxaa soo labeeya rag xirfad ciidan markii hore ku shaqaysan jiray, xilligii dawlada ama ka mid noqday ciidamayowga burburka ee kala jaadka ah. Labadan qolo waxay isku kaabeen aqoonta badmaaxnimada, isticmaalka gaadiidka badda, isticmaalka alaadda sheegta fogaanta iyo jihooyinka badda, kaartada weerarka iyo iska difaacida khatar kasta oo kaga immaan karta la haystayaasha ama gacan dibadeed.
kooxo maalgeliyayaal ah: kooxahani oo maalgelinta hawlgalka iyo kharashaadka ka danbeeya bixiya waxay ku xisaabtamaan saamiyo sare. Waxayna isugu jiraan dad ganacsato caadi ah ahaa oo sidan doortay, inta badanna is qariya, iyo rag kasoo dalacay kooxda hore(weerar tegi jiray) oo markii ay saami buuran heleen isu rogay maalgeliyayaal, iyagoo si bareer ah u hor booda kooxohooda.
Fududeeyaal:waa kooxaha ugu qallafsan in la fahmo, farsamooyinka ay adeegsanayaan awgood. waxayna bulshada kaga jiraan dababaqada sare. Waliba ku darsoo waxaa ka mid ah ajaanib. Inkasta oo qoladani muruq iyo maal bixin haddana hawshoodu miisaan wayn ayey leedahay, saamiyo door ahna waa isla duubaan. Hawlahooda waxaa ugu muhiimsan in ay bixiyaan macluumaad fududaynaya in Maraakiibta la afduubayo la haleelo, in burcadu gabbaad iyo badbaado hesho, gorgortanka iyo kala qaadashada madaxfurashada.
Inna Keena Hawl Gallee!
Marka hawlgalka loo baxayo waa in aad la isu daroogeeyaa, oo qaad faro badan la baduugaa iyo wixi kale ee u raaca, dhawr saaco ka hor inta aan la bixin. Tiro ahaan waa in kooxda shuftada ahi ka kooban tahay ugu yaraan 10 qof. Waxay wadanayaan labo saxiimadood (doonyo yar yar oo aad u dheereeya). Mid ka mid ah saxiimadaha waxaa lagu qaadanayaa saadka, sida: Raashinka, Biyaha iyo shidaalka. Midda la baadna waxaa lagu qaadanayaa jaranjaro dheer, waana midda Maraakiibta baacsanaysa oo qabanaysa.
Kooxdu waxay diyaarsanaysaa saddex nin oo muhim u ah:
Nin aad u yaqaan wadida saxiimada, oo aan baacsiga iyo baaxaa-dega hirarka badda ku qarqoomin.
nin ridida qoryaha baasukaha ah aad u yaqaan.
nin u diyaarsan oo fudud oo noqda qofka ugu horeeya ee fuula Markabka oo soconaya haddii loo baahdo, inkasta oo hawshan mararka qaar loo tartamo. Maadaama uu labo qof la saami yahay ninka ugu horeeya ee fuula Markabka.
Maraakiibta la ugaarsanayo waa kala jaad. Qaarba xaalad gooniya ayey burcadu kala kulantaa. Qaarkood xawaare sare ayay ku socdaan oo in la gaaraa way adag tahay. Qaar kale joogooda ayaa sareeya oo in la fuulo waa dhib. Waxaa uga sii daran mararka qaar waxay afka ka galaan Maraakiib dagaal! Hase ahaatee, fursada ay ku qabsan karaan Markab waa mid saraysa markasta.
Goorta ay bidhaanta Markab la hunguriyeyn karo u muuqdo, ayey ku baacsadaan saxiimadii ay u qoondeeyeen. Saxiimadu gadaal ayay ka raacdaa Markabka, si gaar ah waxay tub ka dhigataa bartamaha hirarka biyaha ee Markabku labada dhinac u kala tuurayo. Wuxuuna badanaa weerarku ku bilawdaa labo waji:
haddii Markabka joogiisu gaaban yahay ama jararjarto si sahlan u qabsan karto waa loo boodayaa. Islamarka jaranjarta la suro ayaa hal nin oo qori fudud wata islamarkaasna baaskoolad xarig lagu laadlaadiyey ay qoorta u suran tahay(si haddii shil ku dhaco uu ugu danbaynta naftiisa isugu badbaadiyo) u boodayaa.
haddiise Markabka joogiisu sareeyo oo aysan jaranjartu qaban karayn ama uu xawaare sare ku soconayo, waxay si xun ugaga qaraacayaan Baasuke dhaawac xun u gaysta aqalka Markabka, markaas ayaa Kabtanku Markabka joojinayaa oo is dhiibayaa si uu waxyeelo intaas ka wayn uga hortago. Goortaas ayaa burcaddu degdeg ku fuulayaan.
Si kastaba dusha Markabka haku gaareene, burcadu si feejignaan leh ayay ammaanka Markabka u hantaan. Waxay isu qaybiyaan hore, gadaal iyo dhinacyada. Ninka ugu soo horeeyey ayaa meesha Markabka laga wado taga. Wuxuu qori ku qabtaa Kabtanka, una dhiibaa warqad ay horay u wateen oo awaamir iyo shuruudo ku qoran yihiin. Warqadaas waxay ku dalbanayaan burcadu: in Kabtanku cadeeyo tirada shaqaalaha Markabka oo aysan cidina dhuuman, ciddi is qarisana ay dilayaan. Midda labaad, in uusan cidna xiriir la samayn karin oo uu isgaarsiinta jaro. Midda sadexaadna in uu Markabka u dhaqaajiyo jihada ay u tilmaamaan. Midda afraad, in aysan isku dayin wax iska caabin ah
Dabadeed waxay si taxadar leh qol ugu xereeyaan shaqaalaha Markabka oo ay baareen. Markabkana waxay u dhaqaajiyaan dhinaca ay doonayaan.
Waa Haynaaye Yaa Afgaranaaya?
Isla amminta ay hogaanka u qabtaan, ayay burcadu la xiriiraan Maalgeliyahoodii iyo asxaabtoodi kale. Waxa ugu horeeya ee ay ka dalbadaana waa nin turjumaan ah. Turjumaanka waa shaqaale la soo kiraysto oo heshiis cad lala soo galo, mararka qaarna waxay ka soo qaataan turjumaanada wadamo shisheeye, turjumaanku ma aha oo keliya inuu luqad uun yaqaan, ee waa inuu yahay nin aqoon iyo ilbaxnimo dheeraad ah leh oo dhinac la taliye ka noqon kara … Calooshi-u-shaqayste wacan.
Xaq dhowrka La-haystayaasha
Burcadda waxaa dhextaal xeerar adag oo ay dhowraan, waxaa ka mid ah in aan si shakhsi ay loogu xadgudbin la-haystayaasha. Ruuxa keliya ee ay xoriyad gaaban u ogol yihiin waa cunto kariyaha Markabka, si uu shaqaalaha u quudiyo. Waxayse digniin ku siiyaan in uusan isku dayin fal ka dhan ah iyaga. Tusaale in uusan sumayn cunto ay iyagu gaar u karsanayaan, ama uusan si ula kac ah u furin hawooyin waxyeello keeni kara.
Waqtiga la haysto Markabka, kooxda Burcadda ah ee saaran hadba waa la bedelaa. Haddana si isku mid ah ayay uga digtoon yihiin in ay xad-gudub kula kacaan dadka u muuqanada ah.
Qiimaha madaxfurashada lagu xirayo Markabka waxay ku xirantahay dhowr arrimood. Sida: noociisa, waxa uu sido, wadanka laga leeyahay iyo waxyaabo kale. Waa arrin ay si ballaaran uga tashadaan inta ku lug leh, waxayna qaadataa ugu badnaan bilo in ay go’aan ka gaaraan.
Waa Innoo Sawir!
Wax la is jiidjiidoba, haddii wax la isla ogolaado, qolyaha madaxfurashada bixiyaa intooda badan Burcadda ay madaxfurashada siinayaan waxay ka qaadaan sawiro(malaha cadayn ayay uga dhigayaan meesha ay lacagtu martay). Tani waxay dhacdaa, ugu yaraan, maalin ka hor marka lacagta la bixinayo.
Si afgarasho leh, ayaa sawirka la doonayo loo qaadaa. Waxaa sawirka qaadaysa Diyaarad.waxay bannaanka u soo saarayaan shaqaalaha Markabka oo katiinadaysan. Burcadduna inta ay dhar jeexjeexan oo kala dheer wada xirato ayey shaqaalaha hub khatar ah ku qabanayaan. …. Sawir argagax leh!
Waxaa jira Maraakiib aan sawir laga qaadin, oo arrimahoodu xasaasi yihiin, sida: kuwa xanbaarsan Sumaha (chemicals), kuwa xanbaarsan warshadaha shaqaynaya(sid kuwa kalluunka gasacadeeya) iyo kuwa hubka sida. Illeen waa burcad ay burcad kale qabataye.
Lacagtu Cirka Haka Soo Daadato!
Lacagta waxaa soo qaada Markab ka soo shiraacda, badanaa, Jabuuti ama Kenya. Markuu soo xera-galo ayaa Diyaaradi ka soo kacdaa. Taas oo lacagta dusha uga soo tuurta Burcadda. Markaas ayay lacagta iska tiriyaan, oo hubiyaan run ahaansheheeda (waxay isticmaalaan makiinadaha lacagta).
Markabka lacagta keenay waa sugayaa ilaa xoriyadiisa la siiyo lahaystaha. Wuxuuna sidaa shaqaale cusub oo lagu wareejinayo Markabka la haystay, oo kuwi hore waxaa qaada Diyaarad, maadaama ay muddo silicsanaayeen. .Sidoo kale wuu sii galbiyaa saaxiibkiis si aan burcad kale u qabsan
Tuugo isma xado e, lacagtaas malaayiinka doollar ah ee baadda lagu helay, Burcad badeedu iskuma khilaafto. Si layaab leh ayay u kala aqooshaan.
Kolleyto Waa Degeynaa
Marna ma sheegaan burcaddu maalinta iyo saacadda ay ka degayaan Markabka, hase ahaatee, waxay qabsadaan muddo waqtiya, sida sitimaan oo kale. Kolkaas ayay si lama filaan ah uga degaan.
Mudada ay ku qorshaysan tahay in ay ka degaan waxay ku amraan Markabka kale ee sugaya in uu ka fogaado masaafo fog. Hal mar iyo isku meelna kaga ma wada degaan, ee waxay isticmaalaan farsamooyin ciidan. Xitaa qaarkood waxay la degaan Kabtanka oo hadhowto dib u soo noqda.
La Dagaalanka Burcad badeeda
Qorshahani wuxuu noqday mid suuq leh. Oo wadanka awalba baylahda ahaa looga faa’idaysto wajiyo badan:
in khayraadkiisa la boobo, oo dawladii hal Markab oo dagaal soo dirta ay soo raaciso dhowr kale oo khayraadka ehelka waayey yahoobiya. Xitaa duurjoogtii berriga ku noolayd.
in sumaha halista ah loo helo marmarsiinyo lagu soo gaarsiiyo badaha wadanka.
Sidaa awgeed, ma kuu muuqataa sabab
Si kooban haddaan u soo ururiyo shisheeyaha isku soo birmaday ee foodsaarka ka dhiganaya ‘la dagaalanka Burcad badeeda’ iyo Burcad badeeda soomaalidu wax isma doorshaan. – waa wada burcad!
Burcad badeednimadu waa masiibo ummada soomaaliyeed soo foodsaartay. Tan oo dhaqankii iyo akhlaaqdii ummada burburisay, islamarkaasna khayraadkoodi u loogtay shisheeye,. Lamana arag lacagtaas tirada badan wax ka barako liita iyo cid ka hodontay. Adduunka kadeed ayay ka qaadeen, aakhirona ciqaab ayay ku kasbadeen!
Xalka keliya ee looga hortagi karaa waa in Dawlad Soomaaliyeed oo wadanka oo dhan hanata la helaa. Si mooryaanka bahaloobay loo qabto, kan baahanna shaqo iyo nolol loo siiyo.
w/q:xareed s. cadawe